Sida loo xiro Amniga Garoomada
Socdaalka hawada Qorsheynta
Diyaarinta Amniga Garoonka
Sida Loogu Raaco Xeerarka Ammaanka Waddooyinka Markaad Bacahaaga Diyaarinaysid
Garoonka diyaaradaha ee aduunka oo dhan, UK iyo Mareykanka waxay macnaheedu noqon karaan in madax-xannibaadyo kugu xiran adiga oo qorsheynaya safarkaaga adduunka. Qawaaniinta ku dhaqanka mamnuucista dareeraha waaweyn iyo jejebiyadu waa kuwa ugu dhibaatada badan ee soo wajahda socdaalayaasha maalmahan, iyo xirmooyinka loolanka! Aan dhex marno sida loo qabsado:
Maxay Xeerarka Ammaanka Waddooyinka?
Shuruucda amniga ee maddaarka asaasiga ah ee US iyo UK iyo kadibna ay raacdey Midowga Yurub iyo wadamada kale dib u soo celinta waxyaabihii xaddidnaa ee 2006 ka dib markii lagu eedeeyay argaggixisanimo oo la xidhiidha qaraxyo iyo diyaarado duulimaad ah ayaa lagu daabacay London.
Waxaad hoos u dhigi kartaa hoos-u-dhigga xeerarka amniga ee hadda socda, laakiin soo koobitaan kooban ayaa noqon doona: dhammaan dareeraha iyo jelka ka badan 100 ml (oo aan ka ahayn dawo) ayaa laga mamnuucay qaadashadaada. Waxaa sidoo kale lagaa filayaa inaad kabahaaga iyo laptop-kaaga ka saarto marka aad ku soo gudbiso amniga, waana inaad ka qaadaa wax bir ah oo ka timaadda jirkaaga ka hor inta aadan ku dhaafin scaners.
About Liquids, Gels iyo Carry Ons
Sharciyada madaarka ayaa hadda xaddidan dareerayaasha iyo jelooyinka yar yar ee weel yar (100ml), baco cadcad leh oo xiran xirmooyinka Ziploc. Dalalka qaar, waxaad ku qaadi kartaa dareeraha dhalooyinka, sida biyaha, haddii aad soo iibsatay ka dib markii la caydhinayo ammaanka maddaarka.
Dareeraha iyo jelka waa in laga saaraa wixii aad qabatey oo aad u soo dirtay qalabka raajada amniga ee rugtada si gooni gooni ah u ah alaabtaada inteeda kale. Sidoo kale laptopkaaga iyo kabaha aad xiran tahay. Xeerarka garoonka diyaaradaha ee intooda badani waa kuwa ku filan oo ku filan in lagu xiro xeerarka madaarka ee Mareykanka oo maskaxda ku hayn doona inay ka shaqeeyaan waddan kasta.
Sidee Loo Qaadaa Xeerarka Madaarka U Faa'ido Sidee Loo Siiyaa?
Sharciyada garoonka ayaa micnahoodu yahay in dadka safarka ah intooda badani aysan ku xirneyn wax kasta oo loo baahan yahay safar lagu galo boorsooyinka. Hubinta bacda waxa loola jeedaa xoriyad dheeraad ah (baakidhka la hubiyay ayaa weynaan kara, iyo qaadashadu waa inay ku haboonaato baahida cabbirka ), laakiin taasi waxay sidoo kale kugu dhiirigelin kartaa inaad keensato wax ka badan inta dhabta ah ee aad u baahan tahay.
Sidaa darteed nalalka xirmadu waa furaha safar sahlan mar walba - inkasta oo aan mararka qaarkood iigu hubiyo boorsadaydii aan ku duubnahay dareeraha iyo dareeraha gudaha iyo qaadashada dayactirka sababtoo ah waxaan ku qarash gareeyey tikidhada baska oo raadinaya waxyaabaha muhiimka ah sida SPF muraayadaha qorraxda ee dalalka qaarkood, iyo baaritaanadaas ayaa ah waqti aad u dhib badan marka aad safar gaagaaban.
Sidaa darteed, safarrada soconaya mudo ka badan hal toddobaad, mararka qaarkood waxaan eegaa bacda ay ku jiraan waxyaabaha muhiimka ah. Haddii aad qaadaneyso safar soconaya hal toddobaad gudaheeda, waa inaad qaadataa baco qaadista ah si aad uga fogaato khidmadda lugta , inaad sugto si aad u qaadato boorsada la hubiyo, suurta galnimada in aad lumiso boorsadaada la baaro ama raadinta sheyada jajaban ee boorsada hareeraha gacmaha. Waxa kale oo aan haystay qalabka daroogada ee TSA-da ee la ogolaaday ka hor TSA.
Maxay tahay waxyaalaha aad u baahan tahay si aad u gudubto guddiga?
Aniga ahaan, waxbadayda ayaa ah meesha aan ku hayo wax aanan dhali karin. Inkastoo shandada lumay ay dhif tahay, way dhici kartaa, haddii aan haysto dhamaan kaadhadhka SD, oo sawir ka qaadaya safarradayda ku jirta boorsooyinkayga, waxaan dhibi lahaa haddii ay maqan yihiin. Xaqiiqdii, bacda qaadashadaada ayaa dhici karta inay maqan tahay ama la xado, laakiin waxay u badantahay in ay had iyo jeer tahay had iyo jeer.
Inta badan booska boorsadeyda ayaa la qaadaa tiknoolijiyada, ka dibna.
Waxaan haystaa laptop-kayga, telefoonka, Kindle, kamarad, iyo darawal adag oo dibadda ah ee ku jira boorsadayda aan marayo mar walba.
Baasaboorkaygu si cad ayuu u haystaa alaab culus, sida koontada debitka iyo dhowr boqol oo doolar oo qiimo lacageed ah. Dawo, sidoo kale. Waxaan xiraa kaniiniyada xakameynta dhalmada iyo koorso badbaado leh ee antibiyootigga ah ee aan qaadayo, kaliya kiis.
Marka ay timaado qalabka musqusha, dhab ahaantii ma baddalan bacda badan. Waxay si fudud u beddelan karaan dawo kasta oo adduunka ah. Kaliya marka laga reebo waa haddii aan safarka ku socdo oo kaliya. Xaaladdan oo kale, waxaan ubaahanahay in aan helo hal-abuurno oo aan ka soo qaato qaar ka mid ah alaabooyinka safarka ee safarka ah. Qaar ka mid ah daruuriyadayda waxaa ka mid ah:
Muraayad casri ah
Marka ay timaado shaambo, qufac, cadar, iyo geliyo qubeyska, waxaan u soo iibsadaa foomka adag oo ka socda LUSH. Waxay i yareeyeen bilooyin, meeshi yar oo yar, oo si fudud ugu gudbi karaan amniga!
Halkee baan ka heli karaa dareerayaasha yaryar ee yar yar iyo dabayshu?
Goobta ugu fudud ee lagu heli karo alaabta safarka leh waxay ku yaalaan dukaamada daawada ee garoonka diyaaradaha! Marmar dhif ah ayaad adkaan doontaa si aad u heshid mid ka mid ah meel kasta oo ay raadineyso.
Haddii aadan rabin inaad ka baxdid goor dambe ka hor intaadan iibsanin, waxaad u tagi kartaa daawo kasta oo daawo ah oo aad ka qaadatid waxyaabo yaryar oo yaryar (waa inay ka hooseeyaan 100 ml) si aad ugu tagto boorsadaada.
Ugu dambeyntii, waxaad dareemi kartaa dareerahaaga iyo jelcooyinkaaga dhalooyinka caleenta bacda / tubooyinka, kuwaas oo aad ka heli karto daawooyinka maandooriyaha, haddii aanad ka heli karin alaab yar oo meel kasta oo kale ah.
Maxaa ku saabsan socdaalka safarka?
Haddii aad tahay qof caqli-gal ah, waxaad horayba u ogaan doontaa farxad ka timaada socdaalka kaliya bacda qaadida: Ma jirto baahi aad uga walaacsan tahay waxyaabaha aad lumiso, waxaad ogtahay inaadan ka heli doonin dhabar xanuun oo aad leedahay lacag dheeraad ah oo aad ku qaadato safarka haddii aadan u baahneyn inaad ka baxdid jeegga musqusha ee jeeg kasta oo aad qaadato. Shaki kuma jiro - socodka safarka waa hal dariiqo si loo yareeyo dhibaatooyinka socdaalka socdaalka.
Sidee, inkasta oo, aad ku xiran kartaa ammaanka maddaarka haddii aad u baahan tahay inaad ku haysato wax kasta oo ku jira hal bac ah oo u baahan in la qaado shuruudaha ammaanka maddaarka? Sida kor ku xusan, waxaa jira waxyaabo badan oo nadiif ah oo alaabta musqulaha ah ee aad horay u iibsan karto si ay u dhaafaan qulqulka dareeraha ee nabadgelyada, waxaana jira habab sahlan oo ku saabsan qaar ka mid ah dhibaatooyinka kale ee caadiga ah, sidoo kale. Si aad uga fogaato xirmooyinka aerosolka, fiiri dareeraha dareeraha ah ama adag oo ah deodorant iyo timaha. Si aad uhesho culeyska miisaanka culus, waxaa looga jeedaa in aad ka baxdo tiknoolajiyad badan oo aad ku safartid kiniin ah halkii aad ku xiran lahayd laptop iyo telefoon. Iyo haddii aad rabto inaad la socoto maqaar fudud ama fiiqan, kaliya ujeedo inaad ku soo qaadato meesha aad ku sugantahay halkii aad ka bixi lahayd ka hor intaadan ka tegin - lacagta aad ku kaydsanayso khidmadaha baagagga ee la hubiyay waxay macnaheedu tahay inay weli lacag ku badbaadinayso safarkaaga guud.
Soo koobitaan, iftiin xiran, xiro caqli , oo ku raaxee safarka!
Qodobkan waxaa la sameeyay oo la cusbooneysiiyey Lauren Juliff.
Tilmaamaha Ardayga ee Helitaanka Duulimaad Fiican
Sida Loo Helo Tikidhada Ciyaaraha Duulimaadyada iyo Diyaargarowga Dheeraadka Dheeriga ah Online
Guudmarka Shirkadda Qorsheynta ee Macaamiilka
Sidee Ayuu Dammiinka Gawaarida Saameeyaa Saameyn Ugu Socdaa Caalamka?
Raac Xeerarkan Xoogan ee Cimilada ee Duulimaad Xoog leh
Maxay Diyaar La Yihiin Diyaarad Diyaaradeed?
Luujiyada Maalmaha Furanka iyo Bandhigga Cirka
Eeg khabiirka Indianapolis ee kuxiga sawirada farshaxanka ah
Hagaha safarka ee sida loo booqdo Denver miisaaniyad
Sababtoo ah dadka safarka jecel waxay jecel yihiin luuqadaha Nobu iyo Nobu Hotels
Sida loo sameeyo Nidaamka Qadka Badan ee Disneyland
Sawir Sawir ah ee Hotel Fateh Prakash Palace Hotel Udaipur
10ka Shey ee ugu Wanaagsan ee Chiang Rai, Thailand
Xeebaha Colombia: Jir-dhiska, laakiin Janno-raxan-la'aanta ah
Tilmaamaha Dhameystiran ee Oklahoma City 4-tii July
Meelaha ugu Sarreeya ee Fikradaha ee California ku yaalla Near Los Angeles
Codsiga Shaqo la'aanta ee Tennessee
Taariikhda Ellicott City, Maryland: Waxyaabaha Laga Helo Waxyaabaha Lagu Hayo
Macau Xilliga Xilliga Xilliga
Cimilada Cimilaha iyo Tilmaamaha Hawlaha ee Socdaalka ee Shiinaha Janaayo